China Mini Linear Actuator FD5 mveliso kunye nabenzi | Ukuhlanjululwa
I-FD5 Linear Actuator yiSanxing Mini Linear Actuator, yayilelwe emzimbeni odibeneyo kwaye ubungakanani bayo buncinci. Isetyenziswa ngokubanzi kwi-automation yasekhaya, kwikhabhinethi, kwishishini lezolimo, kwimveliso yeemoto nakwiirobhothi.
1 .ICANDELO LOLAWULO LWEZIKOLO.
1500N (Push) / 1200N (Tsala)
I-15%, yeka imizuzu eyi-17 emva kokuqhubeka ngokuqhubekayo imizuzu emi-3
Mnyama / Ceba
I-actuator ye-FD5 isetyenziswa ngokubanzi kwiwindow, ngenxa yesayizi yayo encinci, ke lukhetho olufanelekileyo lokuvula ifestile.
I-actuator ye-FD5 isetyenziselwa ukuphakamisa ikhabhathi (ezinje kuthi ikhabethe leekhitshi ekhitshini) kunye nedrowa.
Isetyenziswa ngokubanzi kwi-tracker yelanga ngokunjalo.
Eyona Ntengiso yeNtengiso yeNtengiso ye-FD5
Iinyanga ezili-12 emva kokuthengisa, umsebenzisi kwiimeko eziqhelekileyo, kunye nemicimbi esemgangathweni yeactuator esemgangathweni ebangelwe kukusilela ngomatshini okanye ukonakala, umzi-mveliso wethu unoxanduva lokugcina.
FOB Izibuko: I-Ningbo / iShanghai
Icandelo lebhokisi nganye yokuthumela kwelinye ilizwe: 12 iiyunithi ibhokisi nganye ngokubanzi
Ubukhulu kunye nobunzima ngeyunithi: Ngokwe-actuator stroke ngokubanzi
Ubungakanani Ukupakisha: Ngokwe-actuator stroke
Ixesha lokukhokhela:Ngokubanzi imalunga neentsuku ezingama-4-5 zomsebenzi kwiisampulu. Kwiodolo ezininzi, ixhomekeke kubungakanani beodolo ethile.
Egqithileyo Umqhubi weeLine 24v FD4
Okulandelayo: Ingxelo ngempendulo yombane osisixhobo esincinci FD5-DW
Isantya esiphezulu seLine Actuator, Umatshini wokuhambisa umbane omncinci, Ulawulo lweBhedi yonyango kude, Ulawulo lwe-Wireless Remote lweSibhedlele, Ulawulo lweBhedi yoMbane, Ulawulo lweBhedi yasesibhedlele,